अलबिदा बर्मन बुढा ! आफ्ना राजनीतिक गुरुलाई श्रद्धाञ्जली दिन आर्यघाट पुगे प्रचण्ड लगायतका मुख्य नेता – Dainik Sangalo
अलबिदा बर्मन बुढा ! आफ्ना राजनीतिक गुरुलाई श्रद्धाञ्जली दिन आर्यघाट पुगे प्रचण्ड लगायतका मुख्य नेता
July 22, 2020 457
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक अथक योद्धाको निधन भएको छ । यो द्धा, अर्थात बर्मन बुढा । ९० वर्षको उमेरमा बुढाको बुधबार बिहान निधन भएको हो । सामन्तवाद विरोधी नेपाली जनताको मु क्ति यु द्धमा बुढा जहिले पनि अग्रमोर्चामा रहने गर्दथे ।
रोल्पाको थवाङ घर भएका पुराना कम्युनिष्ट नेता बरमन बुढाको निधन भएको छ । पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको बुधबार बिहान निधन भएको हो । उनी ९० वर्षका थिए । विगत एक वर्षदेखि उनको आन्द्राको क्या’न्स’रको उपचार हुँदै आएको थियो ।
उनी रोल्पाका स्थायी बासिन्दा थिए र सधैं कछाड मात्रै लगाएर बाँचे । रोल्पा थबाङको ठूलो गाउँबाट १५ मिनेटजति जुर्बाङको मध्य भागतिर एउटा ठूलो घर छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र थवाङको इतिहाससँग जोडिएका बर्मन बुढाको घर हो यो । पछिल्लो समय उनको यही घरमा समय बित्ने गरेको थियो ।
थबाङमा मात्रै होइन, उनी सिंहदरबार पनि कछाडमै पुगे । २०४८ सालको संसदीय चुनावमा रोल्पा क्षेत्र नं। १ बाट सांसद जितेका बुढा घरमै लगाइरहेको कछाडसहित नै संसद् भवन छिरे । कछाड लगाएर संसद् गएको देखेर कतिले उनलाई पा’गल नै भने । ‘म सँधै यस्तै कछाड र चप्पलसहित संसद्मा गएँ, मेरो पोशाक नै यही हो त किन अरु खोजुँ रु’ त्यसताका बुढाले भनेका थिए ।
सांसद् हुँदा पनि कछाड नछोडेको देखेपछि उनलाई कतिले कछाडवाला भने । एकपटक संसद्लाई संबोधन गर्न राजा वीरेन्द्र आउँदै थिए । संसदका सचिवले बुढालाई राजा आउने भएकाले एक दिनका लागि भने पनि राष्ट्रिय पोशाक लाइदिन भने । यो कुरा सुनेर बुढा जंगिए – के यो अर्राष्ट्रिय पोशाक हो रु उनको प्रश्न सुनेर संसद्का सचिवले केही बोल्न सकेनन् । राजा संसद्मा आउनुअघि नै बुढा कछाड र चप्पल लगाएर संसद् भवनमा छिरे । उनलाई धेरैले को हो यो भनेर हेरे । कतिले त को बहु’ला आयो भन्ने ठानेछन् । राजालाई भन्दा पनि उनलाई नै हेरिरहे । तैपनि उनले केही अप्ठेरो महशुस गरेनन् । राजाका अगाडी रवाफका साथ कछाडमा बसिरहे ।
पहिले पनि एकपटक राजाको सवारीमा सुर्खेत जाँदा उनले कछाडै लगाएका थिए । उनीसँगै गएका अरु दुईजनाले भने मागेर दौरा सुरुवाल लगाएका थिए । २००७ पछि थबाङमा तत्कालीन मुखिया तथा कांग्रेस नेता कृष्ण झाँ’क्री सर्वेसर्वा थिए । २०१२ सालतिर बर्मन बुढा लगायतका युवाहरुले भेडी गोठमा बसेर गाउँका ठूला ठालुलाई कु’ट्ने सल्लाह गरे । र, कु’टे पनि । उनीहरुलाई कम्युनिष्ट भनेर एक महिना जे’ल हा’लियो । यही जे’लमा उनको भेट कम्युनिष्ट नेताहरु मोहनबिक्रम सिंह र खगुलाल गुरुङसँग भयो ।
विभिन्न समयमा मोहनविक्रम सिंह, प्रचण्ड, मोहन वैद्य, कृष्णसेन इच्छुक र रामबहादुर थापा बादलले थबाङलाई आधार बनाएर काम गरेका थिए । यु द्ध कालमा माओवादीले सिधै राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्ने भनेपछि त्यसको चाँजोपाँजो पनि बुढाकै पहलमा मिलाइयो ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख अग्नि सापकोटा, पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा, ओनसरी घर्ती, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेल, मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरु बुढालाई अन्तिम श्रद्धान्जली दिन पशुपति आर्यघाट पुगेका हुन् ।
बुढाको पार्थिव शरीरमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । बुढा तत्कालीन एकता केन्द्रको तर्फबाट २०४८ सालमा रोल्पाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बनेका थिए ।
Prevलकडाउन हटेकै दिन कोरोनाले लियो थप एक जनाको ज्यान
Nextसुनको मुल्य आकासियो, एकै दिन १३०० बढ्दा मुख्य कति पुग्यो हेर्नुस्
माझी बस्ती बनाउन पैसा पुगेन भन्‍ने अनि श्‍वेता दिनदिनै नाइट क्लब जाने ?
प्रहरी’लाई नै रुखमा बाँ’धियो भैसी चोरी घट’नाको अनु’सन्धान गर्न गाउँ पुग्दा (भि’डियो हे’र्नुहोस)
बाइक मिस्त्री यि बुढाबुढीको रोमाञ्चक प्रेम कहानी
खुसीको खबर पल्सर १५० को मूल्य घट्यो !